Thursday November 01, 2018 - 12:07:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Labada gabdhood oo isla dhashay ayaa lagu kala magacaaba Taala Faarac oo 16 sano jir ah iyo Rootaana Faarac oo 22 sano Jir ah waxaana meydadkooda la helay 6 maalin kadib markii raadkooda lagu waayey magaalada Virginia oo isla wadanka mareykanka katirsan.
Qof American ah oo deggan xaafadda Manhaten ee magaalada New York oo wabiga u dabaal tagay ayaa lagusoo waramayaa inuu helay labada Meyd, kuwaas oo dul sabeynayay wabiga, iyagoo iskula xeran xarko si aysan u kala harin, waxa uuna durbadiiba ku war galiyey ciidanka Poliska, kuwaas oo ugu dambeyn goobta soo gaaray.
Baarayaasha ayaa sheegaya in aan la garanayn illaa iyo hadda qaabka loo dilay labadan gabdhood balse meydadkooda ay u diraan Dhakhatiirta ku shaqada leh, waxa ayna muujiyeen suurta galnimada in gabdhaha lagu dilay meel ka baxsan magaalada, Tayaarka wabigana uu soo qaaday meydadka ilaa uu keenay bartamaha magaalada New York.
Sarkaal katirsan ciidanka police-ka magalada Virginia ayaa ka dhawaajiyey in ehellada labadan gabdhood ay 24kii bishii lasoo dhaafay kusoo wargaliyeen maqnaanshahooda saraakiisha police-ka, illaa iyo xiligan ay wadeen baaritaano ku aaddan halka ay ku maqan yihiin, isagoona sheegay in marka la fiiriyo qaabka ay meydadka isugu xirnaayeen, loo badaniyo in gabdhahan si kas ah loo dilay, kadibna wabiga lagusoo tuuray.
Waxa uu tilmaamay in meydadka ay isaga xirnaayeen qoorta dhexda iyo lugaha intaba, taas oo muujinaysa in qofka dilay uusan rabin inay kala haraan, sidoo kalena ay suurta gal tahay inuu rabay in culeyskooda uu geeyo wabiga hoostiisa, si aan waligaad loo helin ilaa meydadku ay ka go’go’aan.
Safaarada Sucuudiga ee wadanka Mareykanka ayaa sheegtay in lagusoo war geliyey dhacdadan xanuunka badan, hadana iyada iyo wasaaradda arrimaha dibada mareykanka ay kawada shaqeynayaan, qaabki loo ogaan lahaa dadkii falkan geystay, ayna wada sugayaan warka kasoo bixi doona baaritaanka dhakhaatiirta oo goor hore sii horeysay bilowday.
Waxa ay tilmaantay inay xiriiro la sameysay ehelada labadan gabdhood ee walaalaha ah, ayna u qabatay qareen arinta baaritaanada si gaar ah ula socda ilaa inta ay kasoo dhamaanayaan.
Dilalka loo geysanayo gabdhaha muslimaadka ah ee da’dooda ay ka hooseyso 30ka sano, ayaa waayadan danbe kusoo badanayey gudaha dalka mareykan, waxaana la xasuusta in 15ki Bishan meydadka laba gabdhood oo Somali ah laga helay magaalada Chaska oo katirsan gobolka Minnesota, laba maalin kadib markii hoygooda laga waayay.
Labada gabdhood ee Somalida ah ayaa ahaa ilma abti, waxaana lagu kala magacaabi jiray Bushra Cabdi iyo Xafsa Cabdulaahi, waxa ayna ahaayeen 19 jiro sida lagasoo xigtay ehaladooda.
Dhacdooyinka noocaan ah ayaa soo laalaabtay, police-ka dalka mareykankana ilaa hada wax tafaasiil ah kama bixin qaabka ay dilalkan u dhacaan, iyo cida ka danbeyso intaba.